Ishidi lokuvikela upende wemoto
Itheyiphu ekhanyayo ekhanyayo
Ifilimu le-CPE le-apron ye-CPE
PEVA seam uphawu uphawu tape alahlwayo cloot zokuzivikela ...
Ifilimu lokunamathela elishisayo le-PES elishisayo lephaneli ye-aluminium
Ifilimu lokunamathela elishisayo le-EAA le-aluminium
Ifilimu yokuhlobisa ibizwa nangokuthi ifilimu lokushisa eliphakeme neliphansi ngenxa elula, ethambile, enwebekayo, enezinhlangothi ezintathu (ukujiya), okulula ukuyisebenzisa nezinye izici, lisetshenziswa kakhulu ezindwangu ezahlukahlukene zendwangu njengezicathulo, okokugqoka, umthwalo, njll. Kuyinto yokuzikhethela kwezemfashini nokungcebeleka ...
Isitayela esincibilikayo esishisayo esishisayo
Ifilimu eliphrintiwe luhlobo olusha lwezinto zokuphrinta ezingasebenzisi imvelo, eziqaphela ukudluliswa okushisayo kwamaphethini ngokunyathelisa nangokucindezela okushisayo. Le ndlela ingena esikhundleni sokuphrinta kwesiko kwendabuko, akukhona nje ukuthi kulula futhi kulula ukuyisebenzisa, kepha futhi ayinabuthi futhi ayinambitheki ....
Lo mkhiqizo umkhiqizo wethu othengiswa kakhulu kusukela ubhadane lomhlaba wonke lwe-COVID-19 ngo-2020. Luhlobo lomugqa we-PEVA ongenamanzi owenziwe ngezinto ezihlanganisiwe, ezisetshenziselwa ukwelashwa okungangenwa ngamanzi emigqeni yezingubo zokuvikela. Ngokuvamile senza ububanzi 1.8 cm no-2cm, ubukhulu be-micron engu-170. Qhathanisa ...
Lo mkhiqizo ungumkhiqizo wethu othengiswa kakhulu kusukela ubhadane lomhlaba wonke lwe-COVID-19 ngo-2020. Luhlobo lomucu ongenawo amanzi we-PEVA owenziwe ngezinto ezihlanganisiwe, ezisetshenziselwa ukwelashwa okungangenwa ngamanzi ezicutshini zezingubo zokuzivikela. Uma kuqhathaniswa ne-PU noma imichilo yokunamathela eyenziwe ngendwangu, inezindleko eziphansi ...
Ifilimu evikelayo ye-H & H Car
I-H & H izibophezele ekuthuthukiseni nasekukhiqizeni ifilimu evikelayo esezingeni eliphezulu ye-TPU yezimoto. Imboni yethu itholakala esifundazweni sase-Anhui, eChina, ehlanganisa indawo engamamitha-skwele angama-20,000, neqembu lethu le-R & D kanye nesisekelo sokukhiqiza. Ngaphezu kwalokho, imishini yethu yokukhiqiza nokuhlola ...
I-HD371B yenziwa ngezinto ze-TPU ngokuguqulwa okuthile futhi kube fomular. Kuvame ukusetshenziselwa ibhande elinemigqa emithathu elingangeni manzi, izingubo zangaphansi ezingenamthungo, iphakethe elingenamthungo, uziphu ongangeni manzi, umucu ongangeni manzi, impahla engenamthungo, izembatho zokusebenza okuningana, izinto ezibonakalisayo neminye imikhakha. Umkhiqizo oyinhlanganisela ...